SAWIRRO: Puntland oo banaanka u soo saartay kaarayaasheeda & hubkii cuslaa ee ku jirey Xera-siinaay Galkacyo.
April 7, 2021 Xuseen 20
Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi, Wasiirka Wasaradda Amniga Mudane Cabdisamad Maxamed Galan, Taliyaha Ciidamada daraawiishta Mudane Gen Yaasiin Cumar dhere ayaa komeeray xerada ciidanka Siinaay ee magaalada Galkacyo.
Hoggaanka ciidamada ku sugan Xerasiinay Galkacyo ayaa guddiga dibu-habaynta ciidanka Puntland ee maanta booqday warbixin ka siiyay Ciidamada daraawiishta, baahiyaha ay qabaan iyo sida ay diyaar ugu yihiin in ay difaacaan Dalkooda.
Xerada Siinaay ayaa ah mid ay ilgaar ah ku hayso Dawladda Puntland waana kayddka Madaaficada Hubka waawayn ee dawladda Puntland, waxaana la sheegay in loo diyaarinayo ka qayb qaadashada difaaca guud ee deegaamada Puntland.
Waa ragii eeyduurka Suuliland Xaargeysa wasi lagaa
kuwii hore xagee ayay ka dheceen? laba hore ayaa latimaadeen Tukaraq midna waa laqabtay midna waa lagubay. hadii aad mar danbe ku dheel dheeshaan ciidanka qaranka Somaliland waxay idiinku iman doonaan Gaalkacayo iyo Qardho markaa aamusa, xishooda oo edeb ku jooga dhabayacooy
Hubka Isaaq ayaa loo wadaa waxaad maqli doontaan waa la qabsaday
Anigu xaqiir ma ahi laakiin Puntland wax sidaas ah uguma cudud yara Somaliland. P’Myo iyo kaarayaal ba way haystaan. Waa iska baraajo
HANUUNIYE ISAAQ HA DHIHINE WAXAAD DHAHDA IRIR + JAAMAC SIYAAD IYO BAH HARARSAME.
IRIR WAXAAN UGU MAGCAABAYAA WAAYO
WAXAA KU JIRA SAMAROON IYO CIISE.
PUNTLAND OO AY JOOGIN AMISON IYO QASHIN HADDII AY ISKA CELINEYSO IRIR RAGANIMO IYO GEESINIMO AYAA ILAAH SIIYAY MAASHAALAAH.
Horaa loogu maahmaahay: ‘Doqoni meel lagu diriray ogayd, meel lagu heshiiyay se ma oga’. Guulwadeyaashiinan waaqiciga dhabta ah aadka uga dhegala’oow, waxyaabo badan ayaa xaqiiqdii idin seegan. Dadka Somaliland-nimada aaminsan inay udhaboobi doonto iyo inkale Allaahu Aclam, inta kasokaysa se siyaasadda dalku waxay maraysaa heer heegan loogu jiro in kelitalisnimo kusoo labakacleysay inta la isugu guntado qummaati la isagacaabbin lahaa.
Marka aynu mandaqan xaajo kusaleysno, Puntland, Jubbaland, iyo Somaliland maanta dantoodu waa mid oo waxay ogyihiin in haddii mid ahaantood lawiiqo ay labada kalena udhammaatay. Marka ay kahortagga kelitaliska Xamar noqoto maanta kaaraha Somaliland waa kaaraha Puntland iyo Jubbaland, lama kalaxigo. Dadka saddexdan maamul dhistay oo kunagaaday tacab badan bay usoomareen oo wax walbana uhureen nabadda ay kucaanamaaleen oo kunaalloodeen. Kelitalis dambe safaad kama aqbali doonaan.
Maanta saddexdaasu dantoodu waa mid oo wayna iska kaashanayaan sidii ay Farmaajo iyo sharkiisa iskaga gaashaami lahaayeen. Waa qaladka istraatijiga ah ee iimuuqda inuu Farmaajo kudhici doono oo sixunna u eedi doono haddii aan loocaqliyeynin: waana isaga oo iskudaya inuu Jubbaland mise Puntland wax weerar ah kusooqaado, waayo markaasi min Kililka Shanaad iyo Somaliland ayay taangiyadu Farmaajo kagasoo xiimi doonaan oo uu xeebta Xamar madax-madax iskugu tuuri doonaa marka villada loogusoodhaco.
FG: Taydu waa faallo siyaasadeed oo caadifad qabiil ka hufan; ciddii sikale ufasirataa iyaday jirtaa.
Xisaabtaas meel baad kaqaladday, waana inaad Irirnimada uboodday intaad Dirnimadii kasokeysay katallaabsatay.
Haddaba aan kaasaxo ee, Ciise iyo Samaroon dad badan ayay aqoondarro xun kahaysaa markay iyaga iyo Daaroodka noqoto; wax aan gacaltooyo toleed ahayn runtii umahayaan oo aad ayayna labadan beelood oo sharafta huwan abtinimadooda Daaroodka ku aaddan uqiimeeyaan oo una xaqdhawraan. Siyaasad ahaanna, waxayba kutaaganyihiin mowqifka ah in hoggaaminta qaran ay Soomaali leedahay Daaroodka loo daayo, lagu halleeyo oo loogana haro.
Marka runta iyo xaqa lasheegana Bah-Ararsame, Jaamac Siyaad, iyo Barkad waxaa Majeerteenka iyo Daaroodka kaleba kun jeer ugadhaw oo uga gacalnimo badan Ciisaha iyo Samaroonka.
Isaaqu marna waxay ku cataabaan waa nala xasuuqay waanala faraxumeeyay islaamihii la qabay ayaa Morgan wada aroosay caruurtayada wixii siteetameeyadii dhashay waa faqash oo majeerteen ayaa wada dhalay iyo wax la mid ah marka kalena dhuusadooda lagama joogi karo. Walaahi Puntland waa idinkasii jeedaa ma doonayso Dhulbahante inay dhexda ku go aan waana sababta ka hor taagan inay dagaal ku qaadan sool balse walaahi Puntland maalinkay go aansato dagaal halkii loo qaxi jiray iyo Daroor Iidoor kama sokayn doono ee ogaada. Aduunka Iidoor wax ka fulaysan ma jiraaan waxka calaacal badan ma jiraan. Iidoor naagahoodii Garowe iyo Bosaso ayaa jaariyado kawada yihiin kuwa kalena sikale ayay u ganacsadaan ayagoo macaluul iyo darxumo ugasoo hayaamay Burco iyo Hargaysa.
Waxaan hubaa in Dhillo ku dhashay, waxaa caddaynaya afxumada hablaha Somliyeed, wacal baad tahay, Majeerteen hablahooda mala wada aasay, maamo Malyuun iyo Ayan Xirsi iyo boqolaal kale oo adduunka laga yaqaan ma illowday, hablaha Somliyeed sharaf bay mudan yihiin qolo ma leh Inan Gumeed
Kkk waa ciidanka baciid. baciidka geeso, dhaadher markii libaax soo galana wuu cararaa lascaanood iyo tuqarak wey ka soo carareen. 15 garoowe u jiraan ciidanka somaliland ciidanka puntland rooraaye,
Dhib maleh hadii Puntland 3-da kaare noo keento.kkk Laakiin waxaan filayaa inay Qoor Qoor ugu Baali Xooftaynayaa. Puntland madaxdeedu maaha dad waalan. Waa ogyihiin haday duulaan ku qaadaan Somaliland in ay lamid tahay is del-delaad/qarxin.kkk
PUNTLAND CADOOW BADANAA!
QOLKAAN MAXAA XAQIIRIIN ISUGU YIMAADAN
ISAAQ + SAMAROON + CIISE + JAAMAC SIYAAD + BAH HARARSAME AYAA KU FAANAYA HAL QABIIL AYAAN TANGI KA QABSANAY.
IIDOOR HAL CADOOW AYAY LEEYIHIIN KAASNA WAA PUNTLAND.
PUNTLAND IMISA CADOOW AYAY LEEYIHIIN:
2) AL SHABAAB
BAL YAA KA GEESISAN PUNTLAND?
XAQIIR KAMA SUGAYO INUU NOO GARAABO OO RUNTA KA SHEEGO TAARIIKHDA.
Anigu majecli somali iney dagalanto balse waxan ad uga yaba kuwa halkan waxku qora e mamuöla hargeysa faan war marki dagalku dhacay sow adinki kuwashay farmaja naso weraray oyo xamar ayanaso weraray hhhh xaqiiq waxa ah in hadey dagal noqoto aydan iska celin Karin Puntland waliba adigo inta badan dhulbahante kula jiro waliba qabiladi xabada ridi jiray marka xiniyo ragg iga mid ah ayadku jogta dhulkas walle inadan awodku joogin waxba yanan laga nixin cidankan wbt.
Walaalo ha u jawaabin mid kasta oo Isaaqa wax ka sheega. Noocaas sare wax jawaab ahi waa ku khasaare.
Sxb may aheyn in aad jawaab janjeedhsan Najah oo keli ah ku afuufto ee waxa wacnaan laheyd inaad kuwa kale ee doqomaha ah ee ishoodu Isaaqa uun aragto aad iyagana midh ama labo ku tidhaahdo.
Imikiyo Faalo yar.
Awlal wuu ku saxsan yahay faaladiisa guud. Isago maah maah DOQON ayuu soo qaatay.
Ana sidoo kale mid kaloo DOQONTA uun ku saabsan aan soo qaato.
Waxa la yidhaa Doqontu Il keli ayay leedahay, Ishaasna walaalkeed ayay ku eegtaa.
Imika inta halkan soo gashay oo dhami indhahoodu waxay kusoo foogan yihiin Somaliland.
Maqaleey warlaay malaguu waramay, ina cali la dilay oo cumar la dilay. Maba ogaba in Farmaajo uu soo dilay Koonfur Galbeed, Hirshabeele iyo Galmudugba. Imika uu Jubaland shaqadeedii wado. Puntland ay diirada u saaran tahay. Dabadeed haduu kasoo wada takhaluso ay Somaliland iman doonto.
Labada dhinacba, Qolyaha Somaliland meeshan uga difaaca iyo kuwa Puntland ba badankoodu iyaga ayaa la’isku cadeeyay. Waar wax arka oo indhaha fura. Farmaajo waakaas oo wax xidhayaa ma jiraan. Amison waxay guarantee gareyneysaa amaankiisa. Isaguna daaha dabadiisa ayuu Ciidankii Soomaaliya loosoo tobobaray u adeegsanayaa.
Nasiib wanaag Hogaamiyayaasha Jamhuuriyada Somaliland iyo Maamulka Puntland aad ayay uga feegigan yihiin dhiiladaas kusoo socota. Hadey dantu khasabto oonan imika Farmaajo la dibin daabyeyn oo uu xadhkaha soo goosto oo uu Puntland usoo dhigto Somaliland wey ka difaaci Farmaajo iyo intuu soo dhunsadoba. Jubalandbey maanta joogtaa oo u baahan in dabarka halkaas loogu xidho.
Macallin fasal kukacay oo kii ugu dhawaa usha ku billaabay un igasooqaad saaxiib.
Isaaq iyo Majeerteen waa dad walaal ah, mana dirirayaa . Balse intii hore waa isaga soo dhawaan. Way ogyihiin in laga faaideysana oo sheekado tahey lafa maroodi waa la isku jabshaa. 2da qolo waxaa gumaadey Dhulgub Afweyne
War Yaa pudhland Muuse biixi waa nin waalan ha isku Soo jeedinina Dagaal Dagaal waxaas Ka baxa Farmaaje NAbad IYO Nolol baa is haysaan Hada MaXaa Furin kale isugu Furaysaa Maanta maalin as Ka jilicsan Tihiin Ma Jidho
Muuse biixi Muufadiisa Maraa ugu dhacday Maamul Gobleed dada la Bah dilayo Kuma jiro waqtigan aan joogno beesha caalamka waa Qasbi lahayd inuu xalane imaado
Siyaaasada barta Muuse biixi ciidan IYO hub IYO dhaqaale ba haysta bensinka Berbera Free u Yahay ha isku Soo jeedinina Dowlada Farmaaje Iska dhiciya
Sabuun yaa haysta. Imisa kaare ayaa la idin gubay. Masakiin is ilaaliya. Hadii isaaq idinku soo fakado bada ayaa galysaan dhabayaco.